War laga soo Saaray xaaladda Soamaaliya - Awdinle Online
Home News War laga soo Saaray xaaladda Soamaaliya
War laga soo Saaray xaaladda Soamaaliya
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ugu baaqay dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada inay dib u billaabaan wadahadalkooda si ay u xalliyaan khilaafka u dhexeeya.
Warbixin kasoo baxday Golaha Ammaanka ayaa lagu sheegay inay walaac ka qabaan in khilaafkaasi uu caqabad ku noqon karo fulinta ajandayaasha qaran.
Golaha ayaa sidoo kale bogaadiyey dadaallada lagu doonayo in doorasho qof iyo cod ah oo waafaqsan dastuurka dalka lagu qabto sanadda 2020.
Golaha ayaa warbixin kasoo saaray xaaladda Soomaaliya kadib markii dhowaan ay warbixin ka dhageysteen Ergeyga gaarka ah James Swan,wakiilka gaarka ah ee Midowga Africa Fransisco Madeira, Guddoomiyaha guddiga doorashada Xaliimo Ismaaciil iyo Cismaan Macalin oo ku hadlayay bulshada rayidka ah.
Dhagaysiga kadib ayuu Goluhu soo saaray warbixin uu ugu baaqay Dowlada federalka iyo dowlad goboleedyada goboleedyada inay dib u bilaabaan wadahadallada si xal looga gaaro arrimaha taagan islamarkaana loo dhameystiro heshiis siyaasadeed loo dhan yahay.
Xubnaha Golaha Ammaanka ayaa si gaar ah u adkeeyay in xal laga gaaro xaalada Jubbaland, waxayna ugu baaqeen dhammaan dhinacyada inay wada-hadal ka galaan arrintan.
Xubanha Golaha Ammaanka ayaa sidoo kale ku baaqay in horumar laga gaaro dib u heshiisiinta iyo abaabulka doorashada Galmudug.
Golaha ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay muhiimada ay leedahay in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, oo nabdoon, loo wada dhan yahay, la isku halleyn karo, mugdi ku jirin, islamarkaana waafaqsan dastuurka qabyada ah sanadka 2020 ama bilowga 2021ka.
Xubnaha Golaha Ammaanka ayaa sheegay in dhameystirka hab doorasho ay u baahan tahay isu-tanaasul, waxayna ugu baaqeen dhammaan dhinacyada Soomaaliya inay khilaafka meel iska dhigaan islamarkaana yeeshaan wada-hadallado wax ku ool ah.
Previous articleSomalia’s Jubbaland VP holed up in Mandera over safety concerns
Next articlemashaariic lagu horumarinayo Warshadaha oo dhowan ka bilaaban doono somaliya